I-Apple isungula ii-betas ezintsha zeewatchOS 4.2 kunye ne-tvOS 11.2 | Ndisuka mac
Nangona sikungoLwesihlanu, oomatshini bokushicilela abatsha baka-Apple kubonakala ngathi abuphumli kwaye kukuba kusuku nje olunye emva kokuphuma kwe-beta yesine ye-macOS 11.13.2, yasasazwa namhlanje, kwimizuzwana embalwa edlulileyo, ikhephu ukubheja kwe I-watchOS 4.2 kunye ne-tvOS 11.2.
Siyabona ukuba iApple inomdla kakhulu ekubeni ii-betas ezintsha zazo zonke iinkqubo zayo zifikelela kubaphuhlisi ukuze zivavanywe kwaye, ngale ndlela, sizicacise ngokukhawuleza kunokuba siqhele ukwenza.
U-Apple ukhuphe kule mpelaveki ii-betas ezintsha zeewotsOS 4.2 kunye ne-tvOS 11.2, ii-betas ezimbini eziza kwenza abaphuhlisi bezicelo zezi nkqubo bangazivavanya kwaye ke, ukugqabaza kwiindaba kunye nokuphucula abakubonayo.
Okwangoku kusekwangoko kakhulu ukuba singazi ukuba ezi betas zivela nyhani kwisandla seendaba esingasazaziyo, kodwa into abaya kuyizisa ngokuqinisekileyo iya kuba luphuculo kuzinzo kunye nokulungiswa kweempazamo ezivela kwi-beta yangaphambili.
Njengoko sele kuphawuliwe kwiminye imithombo yeendaba ye-intanethi, ii-betas ezipapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku azinazo iindaba eziboniswe kwi-WWDC 2017 yokugqibela, ezinye zinxulumene nemiba yeKhayaPod, ukukhululwa kwakhe kulibazisekile ekuqaleni kuka-2018.
Ke ukuba ungumphuhlisi, kuya kufuneka uye emsebenzini ngenxa yokuba sele unebhetas ezikhoyo kwizixhobo esikuxelele ngazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple ikhupha ii-betas ezintsha zeewatchOS 4.2 kunye ne-tvOS 11.2
I-HomePod ilibazisa ukumiliselwa kwayo kude kube kwangoko nge-2018